Iiraan oo lasoo afjaray khalalaasihii looga soo horjeeday dowladda – Radio Daljir
Janaayo 4, 2018 7:02 b 0
Tobanaan kun oo dad ah ayaa isugu soo baxay waddooyinka kale duwan ee magaalooyin dhowr ah oo ku yaala dalka Iiraan, kuwaasi oo taageero u muujinayay dowladda Islaamiga ee Iiraan, kadib dibadbaxyo dowladda lagu diidanaa oo ay ku geeriyoodeen 22 qof oo kadhacay dalkaasi muddo todobaad ahna socday.
Dibadbaxyada dowladda lagu taageerayay ayaa yimid saacado kadib markii taliyaha ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan Gen Maxamed Cali Jafari uu sheegay inuu soo afjarmay qalalaasihii dalka ka jiray.
“Maanta waxaan ku dhawaaqayaa inuu soo dhamaaday falaagadii iyo qalqalaasihii dalka ka jiray” ayuu yiri taliyaha Jafari oo uu soo xigtay websiteka ciidamada ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan.
“Tiro dad oo qasawadayaal ah ayaa isugu soo baxay bartamaha magaalada, kuwaasi oo tababaro kasoo qaartay ilaalada kacaanka, waxaana laga qaaday tilaabo oo waa la xirxiray” ayuu yiri taliyaha.
Warbaahinta dowladda Iiraan ayaa horey u sheegtay in la xiray 530 qof, 450 ka mid ah dadkaasi ayaa laga qabtay caasimadda Tehran halka 80-ka qof ee kale laga qabtay magaalada ku taala bartamaha Iiraan ee Arak.
Warbaahinta dowladda Iiraan ayaa soo bandhigtay sawiro iyo muuqaalo muujinayo dad ku dhawaaqaya hal ku dhigyo lagu taageerayo dowladda Iiraan, laguna dhaliilayo kooxaha mucaaradka ee dibadbaxyada dhigay iyo dowladdaha Mareykanka, Israil iyo Sacuudiga.
Dibadbaxyada dowladda lagu diidanaa ayaa 28kii December kadhacay dalka Iiraan, waxaana dadku ka cabanayeen qiimaha cuntada ee sare usii kacaysa, shaqo la’aanta iyo usinaan la’aanta fursadaha dhaqaale ee dalka.